Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Ringworm ပွေး
Sat, Sep 24, 2011 at 1:27 AM
ကျွန်တော့်ရဲ့ တင်ပါးမှာ ပွေးပေါက်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ စိုးရိမ်ရသလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
“မိုးတောင်က ပွေးပေါင်က” လို့ မြန်မာတွေ အရပ်ခေါ်ခေါ်တဲ့ အရေပြားရောဂါကို ဆေးစာနဲ့ Ringworm အပြင် Dermatophytosis; Dermatophytid; Tinea လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဆေးစာအခေါ် နဲနဲ လွဲနေတာက Worm ဆိုပေမဲ့ သန်ကောင် မဟုတ်ဘူး။ Fungus (ဖန်းဂတ်စ်) မှို ဖြစ်တယ်။
1. Beard မုတ်ဆိပ်မှာဖြစ်တာကို Tinea barbae ခေါ်တယ်၊
2. Body ကိုယ်မှာဖြစ်တာကို Tinea corporis ခေါ်တယ်၊
3. Feet ခြေထောက်မှာဖြစ်တာကို Tinea pedis (athlete's foot) ခေါ်တယ်၊
4. Groin area ပေါင်ခြံမှာဖြစ်တာကို Tinea cruris (jock itch) ခေါ်တယ်၊
5. Scalp ခေါင်းဦးရေခွံမှာဖြစ်တာကို Tinea capitis ခေါ်တယ်။
အဖြစ်များတယ်။ အရွယ်မရွေး၊ ကျား-မ မရွေးဖြစ်တယ်။ သူများကို ကူးလွယ်တယ်။ အတူနေတာ၊ အဝတ်အစား၊ ဘီး၊ ရေကူးကန်၊ တိရစ္ဆာန်တွေကနေ ကူးနိုင်တယ်။ မှိုပိုးရှိနေပြီး ကိုယ့်မှာ ပွေးကို မမြင်ရပေမဲ့ သူများကို ကူးစေနိုင်တယ်။
ယားမယ်၊ နီနေမယ်၊ အရေပြားအကောင်းထက် မြင့်နေမယ်၊ မီးလောင်ဖုလိုလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မန်းရည်လဲထွက်ချင် ထွက်နိုင်တယ်။ နုပ်ခမ်းသား တိတိကျကျရှိတယ်။ နီတာက ဘေးဘက်မှာ ပိုနီတယ်။ စက်ဝိုင်းလိုဖြစ်နေမယ်။ ဦးရေခွံမှာ ဖြစ်ရင် ဆံပင်ကျွတ်မယ်။ ခြေသည်း-လက်သည်းမှာဖြစ်ရင် ထူပြီး ပုံပြောင်းနေမယ်။
အမှောင်ခမ်းထဲမှာ အပြာရောင်မီးနဲ့ စမ်းတာကို Wood's lamp ခေါ်တယ်။ KOH exam စမ်းနည်း၊ Skin biopsy စမ်းနည်း နဲ့ Skin culture တွေလုပ်ပြီး သေခြာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
• ဖြစ်တဲ့နေရာကို ခြောက်သွေ့နေပါစေ။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို ဖိနေစေမဲ့ အဝတ်အစား မဝတ်ပါနဲ့။ အဝတ်အစားကို နေ့တိုင်း လျှော်ပါ။
• Miconazole, Clotrimazole ဆေးတွေပါတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့လွယ်တဲ့ Antifungal powders, lotions, creams လိမ်းဆေး ပေါင်ဒါ တခုခုသုံးနိုင်တယ်။
• လိမ်းဆေးထဲမှာ Clotrimazole ပါတာတွေက (Cruex cream, Desenex cream, Lotrimin cream, lotion, and solution) ဖြစ်တယ်။ Miconazole ပါတာတွေက (Monistat-Derm cream), Ketoconazole (Nizoral cream) တွေဖြစ်တယ်။ Econazole (Spectazole) ဆေး၊ Naftifine (Naftin) နဲ့ Terbinafine (Lamisil cream and solution) တွေရှိတယ်။
• ယားလို့ ကုပ်မိရာကနေ ဗက်တီးရီးယား ဝင်နေရင် Antibiotics ပိုးသေဆေး လိုနိုင်တယ်။
• ဖြစ်တာ မကြာသေးသူတွေ ပျောက်တာ မြန်မယ်။ ကြာမှဆေးကုရင် ပျောက်တာ ကြာမယ်။
• လိမ်းဆေးနဲ့ မပျောက်နိုင်သူတွေ၊ ဦးရေခွံနဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်း ဖြစ်သူတွေက စားဆေးပါလိုတယ်။
Griseofulvin စားဆေးကို Dermonorm, Fluvin, Fungivin, Geovin, Gris O.D, GrisactinForte, Grisomed, Grisoral, Grisoral-OD, Grisovin-FP, Idifulfin, Nufulvin, Ulvin, Walavin-250, Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG နာမည်တွေနဲ့ လာတယ်။ အသဲမကောင်းရင် မပေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် မပေးသေးဘူး။
လူကြီး Adult: 0.5-1 g/day ဆေးကို အစာနဲ့သောက်တာပိုကောင်းတယ်။
Hair and skin infections အရေပြားနဲ့ ဆံပင် = 2-8 week
Fingernail infections လက်သည်း =6months.
Toenail infections ခြေချောင်း = 12 months or more
Side Effects ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ပါးစပ်အနာပေါက်၊ ရေငတ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်ကျ၊ အိပ်မရ၊ အားယုတ်။
Griseofulvin for Onychomycosis - Fingernail လက်သည်း မှို၊
• Microsize formulation 1000 mg/day orally in2to4divided doses
• Ultramicrosize formulation 660 to 750 mg/day orally in2to4divided doses
Griseofulvin Onychomycosis - Toenail ခြေသည်း မှို၊
Griseofulvin for Tinea Pedis အားကစားသမားခြေထောက် မှို၊
Griseofulvin for Tinea Barbae မိုတ်ဆိတ် မှို၊
• Microsize formulation 500 mg/day orally in single or2divided doses
• Ultramicrosize formulation 330 to 375 mg/day orally in single or divided doses
Griseofulvin for Tinea Capitis ဦးရေခွံ မှို၊
Griseofulvin for Tinea Corporis ကိုယ်ခန္ဓာ မှို၊
Griseofulvin for Tinea Cruris ပေါင်ခြံ မှို၊
Griseofulvin pediatric dose for Dermatophytosis ကလေး မှို၊
• Microsize formulation: 1 year or older: 10 to 20 mg/kg/day orally in single or divided doses, not to exceed 1000 mg/day
• Ultramicrosize formulation:2years or younger: Dosage has not been established.
• Greater than2years:5to 15 mg/kg/day in single or divided doses, not to exceed 750 mg/day
Terbinafine ဆေးကို စားဆေး၊ လိမ်းဆေး လာတယ်။
Side Effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အစားပျက်၊ ပျို့၊ ဗိုက်နာ၊ အရသာပြောင်း၊ ဝမ်းပျက်၊ အနီပြင်ထွက်။
Itraconazole ဆေးကို Biospore, Candistat, Canditral, Fulcover, Fungicap, Itaspor, Itra, Itrazen, Itrole, Sporanox နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။
ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး သိပ်မကောင်းသူတွေကို မပေးပါ။
Cisapride, Midazolam, Nisoldipine, Pimozide, Quinidine, Dofetilide, Triazolam, Levacetylmethadol ဆေးတွေနဲ့ တွဲမပေးပါ။
လူကြီး 100-200 mg once daily (2 capsules)
Side Effects ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ အစားပျက်၊ ကိုယ်ရောင်၊ အားယုတ်၊ ကိုယ်ပူ၊ အနေရခက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ လိင်စိတ်နည်း၊ အိပ်ချင်၊ သွေးဖိအားတက်၊ သွေးထဲ ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်နည်း၊ ယောက်ျား ပန်းညှိုး၊ အသဲ နဲနဲ ထိခိုက်။
Fluconazole လူကြီး 50-400 mg daily ပေးရတယ်။
ကင်ဆာ၊ AIDS အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသဲရောဂါ၊ အရက်စွဲရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်တွေမှာ သတိနဲ့ပေးမယ်။
Side Effects ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ ဗိုက်နာ၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာမကျေ၊ ခေါင်းမူး။
Tinea Corporis ကိုယ်မှာပေါက်တဲ့ ပွေး
Topical therapy လိမ်းဆေးကို ဖြစ်နေတဲ့နေရာတခုလုံးအပြင် ဘေး ၂ စင်တီမီတာအထိ တနေ့ ၁-၂ ကြိမ် လိမ်းပါ။ အနည်းဆုံး ၂ ပါတ်ကြာမယ်။
Systemic therapy သောက်ဆေးများ
1. Ketoconazole = 3-4 mg/kg/d ပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသဲကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
2. Fluconazole = 50-100 mg/d or 150 mg once weekly for 2-4 weeks
3. Itraconazole = 100 mg/d x2weeks or 200 mg/d x 1 week
4. Terbinafine = 250 mg/d x2weeks